ချာရတီ ဒိုင်း (ရံပုံငွေဖလားပွဲ).......Man U & Chelsea. | ရွှေမင်းသား
Home » ဘောလုံး ရပ်ဝန်း » ချာရတီ ဒိုင်း (ရံပုံငွေဖလားပွဲ).......Man U & Chelsea.
ချာရတီ ဒိုင်း (ရံပုံငွေဖလားပွဲ).......Man U & Chelsea.
လာမယ့် တနဂ်နွေ (5.8.2007) မှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ ရာသီအဖွင့် ပွဲစဉ်အဖြစ် ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ မန်ချက်စတာ ယုနိုက်တက် နဲ့ FA ချန်ပီယံ ချယ်(လ်)ဆီး အသင်းတို့ ချာရတီဒိုင်း(ရံပုံငွေဖလားပွဲ)ကို ယှဉ်ပြိုင် ကစားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်း ကြည့်ကောင်းဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။မြဝတီ ရုပ်မြင်သံကြား ကနေ ခါတိုင်း နှစ်တွေလိုပဲ ထုတ်လွှင့်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ပွဲပြီး ရလဒ်ကို ဒီ ဘလော့(ဂ်) မှာ ဖော်ပြသွားပါမယ်။